ANNKE NC400, ihe niile na -achịkwa na ekwentị gị | Androidsis
ANNKE NC400, ihe niile na -achịkwa na ekwentị gị
Rafa Rodríguez Ballesteros | 09/10/2021 14:00 | Emelitere ka 10/10/2021 08:48 | Noticias
Taa anyị na-ekwu maka ya a ngwá ọrụ, nke ọnụ na anyị ama nwere ike inyere anyị aka ụlọ anyị dị nchebe nke ukwuu. Igwefoto nwere njikọ IP nwere ike bụrụ ngwa ịchọrọ ịhapụ ụlọ gị nwayọ wee chịkwaa ihe niile, igwefoto ANNKE NC400.
Taa anyị chọtara ọtụtụ ohere maka nchekwa nke ụlọ anyị. Mana ịnwe sistemụ nchekwa na -adịkarị ọnụ. Echiche a na -agbanwe site na ngwa dị ka igwefoto ANNKE NC400. Ọ fọrọ nke nta ka onye ọrụ ọ bụla nwee ike nwere nchekwa ị chọrọ maka obere ihe karịa ka i chere.
1 ANNKE NC400 otu igwefoto ijikwa ya niile
2 Ọkachamara na anya dị mma
3 Ihe niile ANNKE NC400 nwere inye
ANNKE NC400 otu igwefoto ijikwa ya niile
Igwe onyunyo IP bụ taa karịa ngwa bara uru n'ọtụtụ ebe. Site na njikọ ịntanetị ụlọ anyị na ANNKE NC400 anyị nwere ike inwe n'okpuru onye na -abanye ma na -apụ n'ụlọ anyị, ma ọ bụ ọbụna mara na ezigbo oge olu ndị mmadụ na azụmaahịa anyị. Ị nwere ike ịhụ ANNKE NC400 Ọnụahịa kacha mma nke ahịa.
Ọganihu nke teknụzụ na -enye anyị n'ihe ndekọ ndekọ onyonyo, ma ọ bụ mgbasa ozi na -aga n'ihu nke ihe na -eme, emeela ka ndụ anyị dị mfe. Ma ugbu a na ANNKE NC400 ọ dịrị anyị mfe iji teknụzụ a ọnụ ahịa dị oke ọnụ maka akpa niile.
Ọkachamara na anya dị mma
Anyị ahụla ụdị onyunyo onyunyo ndị ọzọ nwere atụmatụ echiche, ahịrị gbara agba na ọbụna agba agba. Emebere ANNKE NC400 ka ọ rụọ ọrụ ahụ na nke gi mpụta na -ezute otu ọrụ na -eme ka mmadụ kwenye nyere ngosipụta nke ọrụ ọ na -eji emezu. Ejiri ya 100% ihe igwe siri ike na anyị nwere ike idobe n'ime ụlọ, mana ekele maka nguzogide ya na ihu igwe adịghị mma ọ dị njikere iguzogide ihe na -enweghị nsogbu na Asambodo IP67.
Jide ebe ahụ ANNKE NC400 na Amazon na ọnụahịa kacha mma
Ọ nwere a ntọala siri ike nke anyị ga -ejigide na mgbidi ma ọ bụ n'uko. Anyị ga -eburu n'uche akaụntụ ahụ mkpa njikọ site na eriri ọkụ na njikọ ịntanetị, n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike ijikọ ya site na Wi-Fi. Yabụ, maka nrụnye ya, na nke a, anyị ga -achọ olulu mmiri na kwa ebe dị nso iji jikọọ ọkụ eletrik, nke n'aka nke ọzọ anaghị etinye n'ime igbe.
Ihe niile ANNKE NC400 nwere inye
Ewezuga imewe ahụ na -amasị anyị ma ọ bụ na -adịchaghị mma, ihe dị ezigbo mkpa bụ ihe igwefoto a nwere ike ịnye anyị n'ihe gbasara arụmọrụ yana ojiji. ANNKE 400 kwadebere ya na 1 / 2.77 ″ Ultra HD CMOS sensọ na -enye onyonyo HD dị oke mma na mkpebi megapixel 4. Ndị Ezigbo WDR na 3 dB 120D DNR Balance Lighting ma kpochapụ mkpọtụ maka ndekọ dị mma na ọnọdụ ọkụ dị iche.
na onyonyo abalị nwere mma nke ọma karịa ihe ụzọ ọzọ nwere ike ịnye anyị. ya 1.0 nnukwu oghere ihu na nke gi ọkụ ọzọ na -eru mita 30 hụ na ọ dị nkọ, idekọ agba na ọnọdụ gbara ọchịchịrị kpamkpam. ANNKE NC400 na -eji algọridim nchọpụta ngagharị dị elu iji chọpụta ihe ọ bụla na -aga n'ihu ihe mgbaru ọsọ gị. Gbanye bụrụ nchọpụta nchọpụta ngagharị, sistemụ ahụ ga -agwa oge ahụ site na email ka anyị nwee ike lelee nsogbu ọ bụla.
La H.265 + teknụzụ mkpakọ nweta foto echekwara nwere ihe ruru 300% obere oghere karịa ndị nke ọzọ ka anyị ga -enwe oge ịdekọ ihe na -enwe obere ebe nchekwa. Ọzọkwa kwesịrị ịrịba ama bụ ụda igwe okwu site na ngwa anyị nwere ike ịnụ ihe na -eme nso ma ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ agwa anyị okwu site na igwefoto. Zụrụ ugbu a ANNKE NC400 ma nweta nchekwa ahụ ị na -achọ.
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuhai Dayu Electronic Commerce Co., Ltd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ANNKE NC400, ihe niile na -achịkwa na ekwentị gị
Otu esi enweta egwuregwu zoro ezo nke Microsoft Edge na gam akporo
Otu esi ahazi izipu ozi na WhatsApp